Ka Qayb Qaadashada Magaalooyinka Degaan ahaan Meelaha Cuntada Wild
"Waxaan rumaysanahay in farshaxannadu ay door muhiim ah ka ciyaaraan dib u qorista sheekooyinka miyiga ah," ayaa yiri Michele Anderson, oo ah agaasimaha barnaamijka miyiga ee Farshaxanka Farshaxanka, muddada dheer ee deeqaha McKnight Foundation.
Anderson waa qabanqaabiye, iyo sida muusikada, qoraa hal abuur leh, iyo piyanist, oo ah fanaan riwaayad leh. "Waxaan marar badan ka bartay in magaalooyinka baadiyaha ay yihiin goobo adag oo aad u adag, iskaashi cusub, iyo hal-abuurnimo," ayay tiri.
Laga soo bilaabo daaqadeeda xafiiskeeda galbeedka bartamaha Minnesota ee Fergus Falls (pop 13,304), Anderson waxay arkaysaa farshaxan shaqeeya oo ku daray qiimaha guud ee dadweynaha. Sanadkii 1962-dii, nidaamkii dowlad-goboleedka oo khalkhal galiyay maal-gashiga qaranka iyo ganacsiyada ee dhinaca galbeed ee magaalada si ay ula kulmaan gobollada, dhaqaalaha magaalooyinka ayaa istaagay. Inkastoo sheekadu ay ku dhamaan karto iyada oo ay hoos u dhicin, bulshada ayaa go'aansatay si kale.
Fergus Falls ayaa si tartiib tartiib ah u sii waday si ay u kasbadaan sumcad sida magaalo oo aaminsan awoodda bulshada hal-abuurka ah, iyo maanta, waxay arkaysaa horumarka dhabta ah ee bulshada iyo dhaqaalaha. Farshaxanada shaqeeya waxay abuurayeen goobo muhiim ah waxayna xoojiyeen dhaqaalaha degaanka. Tusaale ahaan, 1990-kii, dadka degaanka ayaa cusbooneysiiyay tiyaatarka qadiimka ah waxaana loo badalay meel ay dadku isugu yimaadaan. Later, waxay hor istaageen burburka Kaddatz, oo ah hudheel taariikhi ah oo magaalada ku yaal, iyo Farshaxanka, kaaliye kale oo McKnight, wuxuu u beddelay meel ay farshaxannadu ku noolaan karaan oo ay muujinayaan shaqadooda.
Laga soo bilaabo daaqadeeda xafiiskeeda Fergus Falls, Michele Anderson waxay aragtaa farshaxan-yahanno shaqeeya oo ku daray qiimaha guud ee dadweynaha.
Muxuu noqday qaab qaran, farshaxanada Fergus Falls ayaa ka dhex shaqeeyay beelahooda si loo abuuro meel macno leh, firfircooni leh, iyo meel caddaalad ah. Sida laga soo xigtay 2017 Creative Minnesota warbixinta, saameynta dhaqaale ee farshaxanka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqanka ee Fergus Falls kaliya ayaa ku dhawaad $ 3 milyan sanad kasta.
Dadka degaanka Fergus Falls waxay filayaan filim ku saleysan isbitaalkii hore ee dawladeed.
Isku-dhafan ee Dhexdheer, Xarun Xiriirin
Markii uu Springboard furtay xafiis ku yaal Fergus Falls 2011, magaaladu waxay ahayd mid aad u liidata mustaqbalka qolalka khaaska ah ee loo yaqaan dhismaha Kirkbride.
In ka badan qarni, 500,000-sq.-ft. hantida waxay ahayd isbitaal dawladeed oo loogu talagalay bukaanno qaba jirro maskaxeed, naafonimo koritaan, iyo ku-tiirsanaanta kimikalka Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa rabay in magaalada ay iibiso guriga, qaar kalena waxay doonayeen in ay dib u cusboonaysiiyaan, haddana koox kale ayaa rabay in ay burburiyaan.
Iyada oo deeq ka timid ArtPlace America, oo kale deeq bixiye McKnight, Springboard ayaa qorsheeyey sanad-nashaadkii dhismaha Kirkbride Building si uu uga caawiyo bulshada in ay soo saarto taariikhda adag iyo xusuusta degaanka ee leh xarun caafimaad oo maskaxeed. Waxay ka soo jeedaan seminaaro farshaxan-ku-salaysan, wax-soo-saarka asaliga ah, iyo bandhigyada, si loo soo bandhigo qaab dhismeedka dhismaha, fannaaniinta maxalliga ah ayaa isbeddelay xidhiidhkii hore ee cakiran ee dhismaha Kirkbride iyo bulshada.
"Waxaa jiray geeddi-socodkan aadka u quruxsan ee dib-u-dhajinta dhamaan lakabta beelaha beesha iyo isku-xirnaanta xaruntan," ayuu yiri Anderson.
Ku rakibida Gina Hunt on xerada Kirkbride.
Dhaqdhaqaaqa farshaxanka ee Kirkbride ma joogin halkaas. Springboard waxay qabataa barnaamij degenaansho socda, Fanka Fanka, xerada. Farshaxanadu waxay yimaadaan labo jeer waxayna joogaan meel kasta oo laba ama laba iyo toban toddobaad ah. Inkasta oo qaddarka cusbitaalkii hore ee gobolka ayaa wali kor u kacday hawada, Springboard waxa uu ku guulaystay in dib u soo celinta bani'aadamnimada goob ay ku jirto xiisad.
Farshaxanno waa dhisme bridge, wakiilada isbeddelka, iyo hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee bulshada.
Barnaamijka miyiga ee Springboard waxay muujinaysaa habka McKnight ee ku aaddan farshaxanka farshaxanka, isaga oo aqoonsanaya farshaxanada shaqeeya inay fure u yihiin dhismaha beelaha firfircoon. Sannadka 2016, McKnight barnaamijka farshaxanka kooxdu waxay qaboojisay qaabkeeda deeq-lacageedka waxayna sii deysay a aragtida isbedelka oo sharraxaysa isbeddel dhexdhexaad ah oo dhexmara farshaxanada iyo gobolka Minnesota; a qaabka macquulka ah, khariidadda wax ku oolka ah ee istiraatiijiyadeed ee natiijooyinka barnaamijku wuxuu ku dadaalayaa inuu gaaro; iyo a qaabka qaabdhismeedka taageerada sanka, oo tilmaamaya lix khayraad xirfadeed oo isku xiran oo dhammaan fanaaniinta u baahan yihiin si ay u guuleystaan.
Muuqaalka farshaxanka ee Mary Rothlisberger, Fergus Falls.
Aragtidan, farshaxanno waa dhisayaasha buundooyinka, wakiilada isbeddelka, iyo hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee bulshada. La shaqeynta farshaxanada waxay kobcinaysaa habab ku salaysan xallinta dhibaatooyinka hal abuurka ah, sheekooyinka saxda ah ee aqoonsiga beesha, dhaqaalaha caafimaadka leh, kobcinta iyo kala-jiidashada bulshada kala duwan, iyo shabakadaha xooggan iyo raasamaal bulsheed.
Sheekada Fergus Falls waa mid ka mid ah dadka kale oo aan tiradooda ahayn. Kaaliyeyaasha farshaxanka ee McKnight, golayaasha gobollada, iyo farshaxanka farshaxanka waxay muddo dheer aqoonsadeen awooda fannaaniinta si loo xoojiyo bulshooyinka.
"Mustaqbalka beelaha miyiga waxay ka muuqdaan miiska aan ku yaala galbeedka bartamaha Minnesota," ayaa yiri Anderson. "Farshaxanno waa in loo aqoonsadaa in ay yihiin kheyraad shaqadan ka mid ah in lagu hormariyo bulshooyinka miyiga ah meelo macquul ah."